Domik Ptashki Birdhouse - ဒီဇိုင်းမဂ္ဂဇင်း
တနင်္ဂနွေ ၄ ဇူလိုင် ၂၀၂၁
Birdhouse ထူးခြားဆန်းကြယ်သောဘဝပုံစံနှင့်သဘာဝတရားနှင့်ရေရှည်တည်တံ့သောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့်လူတစ် ဦး သည်စဉ်ဆက်မပြတ်ပျက်ပြားနေပြီးအတွင်း၌မကျေနပ်မှုအခြေအနေတွင်နေထိုင်သည်။ ၎င်းကိုသိမြင်နားလည်နိုင်သည့်နယ်နမိတ်များတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်လူ့သဘောသဘာဝအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံအသစ်များရရှိခြင်းအားဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ငှက်များ? သူတို့၏သီဆိုခြင်းသည်လူ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်၊ ငှက်များလည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုအင်းဆက်ပိုးမွှားများမှကာကွယ်ပေးသည်။ Domik Ptashki သည်စီမံကိန်းကိုအထောက်အကူပြုသောရပ်ကွက်တစ်ခုဖန်တီးရန်နှင့်ငှက်များကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဂရုစိုက်ခြင်းအားဖြင့် ornithologist ၏အခန်းကဏ္tryကိုကြိုးစားလေ့လာရန်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
စီမံကိန်းအမည် : Domik Ptashki, ဒီဇိုင်နာနာမည် : Igor Dydykin, သုံးစွဲသူ၏အမည် : DYDYKIN Studio .
ဤကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းသည်ထုပ်ပိုးဒီဇိုင်းပြိုင်ဆိုင်မှုတွင်ဒီဇိုင်းဆုတစ်ခုဖြစ်သည်။	အခြားသောဒီဇိုင်းအသစ်များ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ မူရင်းနှင့်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာထုပ်ပိုးမှုပုံစံများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အတွက်ဆုရဒီဇိုင်နာများဒီဇိုင်းအစုစုကိုသင်သေချာစွာတွေ့မြင်သင့်သည်။
သောကြာ ၂ ဇူလိုင် ၂၀၂၁
တခါတရံတွင်သင်သည်ကြီးမားသောဒီဇိုင်းများနှင့်အတူထွက်ပေါ်လာရန်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောဒီဇိုင်နာများအဖွဲ့ကြီးလိုအပ်သည်။ နေ့တိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ထူးခြားသည့်ဆုရဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ဖန်တီးမှုဒီဇိုင်းအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဒီဇိုင်းအဖွဲ့များမှမူရင်းနှင့်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာဗိသုကာ၊ ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်း၊ ဖက်ရှင်၊ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းနှင့်ဒီဇိုင်းမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါ။ ခမ်းနားကြီးကျယ်လှသောဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူများ၏မူလလက်ရာများကိုမှုတ်သွင်းပါ။
Bridal Veil အဆိုပါ Chandelier ဗုဒ္ဓဟူး ၂၈ ဇူလိုင်
Illusion ဝဘ်ဆိုက် အင်္ဂါ ၂၇ ဇူလိုင်
Smartstreets-Smartbin™ စီးကရက် / သွားဖုံးဘင် တနင်္လာ ၂၆ ဇူလိုင်
ထိုနေ့၏ဒီဇိုင်းအင်တာဗျူး ဗုဒ္ဓဟူး ၂၈ ဇူလိုင်
ထိုနေ့၏ဒီဇိုင်းဒဏ္legာရီ အင်္ဂါ ၂၇ ဇူလိုင်
ထိုနေ့၏ဒီဇိုင်း တနင်္လာ ၂၆ ဇူလိုင်
ထိုနေ့၏ဒီဇိုင်နာ တနင်္ဂနွေ ၂၅ ဇူလိုင်
ထိုနေ့၏ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ စနေ ၂၄ ဇူလိုင်
Birdhouse Igor Dydykin Domik Ptashki